Uthelekiso lweeYunivesithi yaseCalifornia
Iimali zokufumana iRhafu, iiRhafu zeziGqibo, uLwazi lwezeMali, ukubhalisa kunye nokunye
Inkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia ibandakanya ezinye zeeyunivesithi ezikarhulumente ezilungileyo kwilizwe. Ukwamkeleka kunye namazinga okugqweswa kwezifundo , nangona kunjalo ziyahluka ngokubanzi. Ishati engezantsi ibeka izikolo ezili-10 zaseYunivesithi yaseCalifornia ngokubhekiselele ngokulula.
Cofa kwiiyunivesithi igama lokungeniswa kwamanye, iindleko, kunye nolwazi lwezemali. Qaphela ukuba zonke izikolo zaseYunivesithi zaseCalifornia zixabisa kakhulu kubafundi base-out-of-state.
Idatha echazwe apha ivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zeMfundo.
Uthelekiso lwee-Campus UC
Campus U bhaliso oluphantsi Umfundi / IsiKhokelo soMsebenzi Abancedayo ngezeMali Ireyithi yokuQiniswa kweNyaka eyi-4 Ireyithi yoNyaka weSifundo seMinyaka eyi-6
Berkeley 29,310 18 ukuya ku-1 63% 76% 92%
Davis 29,379 20 ukuya ku-1 70% 55% 85%
Irvine 27,331 18 ukuya ku-1 68% 71% 87%
ilos Angeles 30,873 17 ukuya ku-1 64% 74% 91%
Merced 6,815 20 ukuya ku-1 92% 38% 66%
Riverside 19,799 22 ukuya ku-1 85% 47% 73%
ESan Diego 28,127 19 ukuya ku-1 56% 59% 87%
esan Francisco IsiFundo seSifundo seMatriki kuphela
Santa Barbara 21,574 18 ukuya ku-1 70% 69% 82%
Santa Cruz 16,962 18 ukuya ku-1 77% 52% 77%
Uthelekiso lwee-Campus UC: Iinkcukacha zoLwamkelo
Campus SAT Ukufunda 25% SAT Ukufunda 75% SAT Math 25% SAT iMathematika 75% UMTHETHO 25% UMTHETHO 75% Imali yo kwamkeleka
Berkeley 620 750 650 790 31 34 17%
Davis 510 630 540 700 25 31 42%
Irvine 490 620 570 710 24 30 41%
ilos Angeles 570 710 590 760 28 33 18%
Merced 420 520 450 550 19 24 74%
Riverside 460 580 480 610 21 27 66%
ESan Diego 560 680 610 770 27 33 36%
Santa Barbara 550 660 570 730 27 32 36%
Santa Cruz 520 630 540 660 25 30 58%
Uyabona ukuba iirhafu zokumkela kunye nemigangatho yokumkelwa kwamanye amazwe ziyahluka kakhulu ukusuka kwinkampus ukuya kwikampus, kwaye iikoyunivesithi ezifana ne-UCLA neBerkeley ziphakathi kweeyunivesithi zikarhulumente ezikhethiweyo kwilizwe. Kuzo zonke iikhampasi, kunjalo ke uya kufuna ama-grade aqinile, kwaye izikolo zakho ze-SAT okanye ze-ACT zifanele ukuba ziphakathi okanye zibhetele.
Ukuba irekodi yakho yemfundo ibonakala kwicala eliphantsi kwiikampu ze-UC, qiniseka ukuba ukhangele ezinye zeendlela ezintle phakathi kwee- campus ezingama - 23 zase-California State University- ezininzi zezikolo zaseCal State zinebhanki e-admissions ephantsi kunezikolo ze-UC.
Kwakhona qiniseka ukuba ufake ezinye zezi nkcukacha ezingentla ngentla. UCSD, umzekelo, unesilinganiso seminyaka emine yokugqitywa kweemviwo esabonakala sisezantsi sinikwe ukukhethwa kwabamkeliweyo, kodwa oku kunokuba kuchazwe ngenye iiprogram ezinkulu zobunjineli eziqhelekileyo kwilizwe lonke ziba neminyaka engaphantsi kweminyaka emine yokugqitywa kwezifundo kuneenkqubo kwizobugcisa, inzululwazi yesayensi kunye nezesayensi. Kwakhona, umyinge we-UCLA ophantsi / umgangatho we-faculty does not translate into a small class and attention to individual level in level level. Uninzi lwezikhundla kwiiyunivesithi eziphambili zophando zinikezelwe ngokugqibeleleyo ekugqibeleni imfundo kunye nophando, kungekhona imfundo ye-undergraduate.
Ekugqibeleni, qiniseka ukuba ungayithinteli kwiiyunivesithi zikarhulumente ngokucacileyo ngezizathu zemali. Izikolo ze-UC zizinye zeeyunivesithi ezikarhulumente ezibiza kakhulu eMelika. Ukuba unelungelo lokufumana uncedo lwezezimali, unokufumana ukuba iifunivesithi ezizimeleyo zinokulingana okanye zibethe ixabiso leYunivesithi yaseCalifornia.
Kuyafaneleka ukujonga ezinye zeendlela ezizimeleyo phakathi kwezi kholeji eziphezulu zaseCalifornia nakwiikholeji eziphezulu zaseNtshona Coast .
Ifoto yeTyeyunivesithi yaseFlorida
IYunivesithi yaseRichmond Photo Tour
I-Verdi "I-Caro Nome" Iingoma kunye nesiNgesi
IziSpecial Possisive Adjectives (iFom Long)
Iminimalism okanye Ubuncinane beMveli phakathi ko-1960 ukuya kuNje
I-Backhand Backspin / i-Sidespin Serve-I-Table Tennis / iPing-Pong
Iifoto zeBantu abaPhezulu kwi-Skating Skating
Funda ukuvakalisa i-French R, ngokugqibeleleyo
Zingaphi Iimbambiso ZaseNkantolo Eziphakamileyo Zikho?
Ukuvavanya ukufakwa kwePerl yakho
Indlela yokuhlakulela ukukhuselwa okungaphezulu kwe-3-4
I-UNH Manchester Admissions
Ukubuyela esikolweni emva kweNkupho yeKatrina
"Bafuna abantu" Iingoma kunye neNguqulelo yeTekisi
I-Teleology ne-Ethics: Iimpawu kunye neziphumo
IsiGenesis Genealogy Online yolwazi kunye neeRekhodi
AmaPolisi aseAfrika-Amerika asekuqaleni
Ukuzonwabisa ngamaFrentshi ngo-'Nhle '
Iinqununu zelizwe elizimeleyo